इमेज साप्ताहिक : 2019-09-29
विदुर/नेपालीहरुको ठुले चाड बडा दशैं सुरु भइसकेको छ । तर यसउपाली ढिलासम्म मनसुन सक्रिय रहँदा नागरिकहरुले भने सास्ती पाउने पक्का भएको छ । प्रकृतिले मात्रै पनि होइन जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिका कारण पनि यो पालीको दशैंमा जगगज गरेर हिड्नु परेको छ ।
सडक निर्माण देखि पुल निर्माण सम्ममा चरम लापरबाही छ । सांसद समेत रहेका ब्यक्तिको निर्माण कम्पनीले निर्माण गर्दै आएको सडक र पुलले यासपालिका दसैंलाई गिज्याई रहको छ । जिल्लाको पहिचान तयार गर्ने र सरकारले लागू गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका सांसदले नै निर्माण जिम्मा पाएको बिकास निर्माणको कसरी प्रभाव पर्दो रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण भनेको छ गेर्खुटारको सडक र पुल ।
गेर्खुटारको सडकमा जमेको आहाल
संसदिय समितिको बिकास समितिको सदस्य रहेका जिल्लाका ‘माननियज्यू’कै निर्माण कम्पनी, अनि जिल्लाकै बिकास निर्माणको लाजमर्दो अबस्था । अहिले बाहिर जिल्लामा नुवाकोटको विषयमा हुने चर्चा पनि यही नै हो । बिदुर नगरपालिका वडा नम्बर १० देखि ११ हुँदै सुर्यगढी गाँउपालिका जोडिने सडकमार्ग । निर्माण सुरु हुनु भन्दा अगाडी सजिलै सबारी साधनहरू हुईकिन्थे । तर जब निर्माणको काम सुरु भयो अनि ४ महिना सम्मपनि सबारी सहज रुपले गुड्न सकेको छैन । बर्षात सुरु भएसँगै त झन् एम्बुलेन्स गुड्नै सकेन । बिरामी डोको र स्टेचरमा बोकेर तलसम्म ल्याउनु प¥यो । सडक चाँडै बन्ने आशमा विदुर नगरपालिका वडा नम्बर १० को वडा कार्यालय निर्माण गर्ने स्थलनै निर्माण कम्पनीलाई सामाग्री राख्न उपलब्ध गराईयो । तर, सररर सबारी हुईकक्याउने नागरिकहरू र जनप्रतिनिधिको आश यो दसैंसम्ममा पनि पुरा भएन ।
बिकास निर्माणको आयोजना अलपत्र परेको नुवाकोटमा यो पहिलो पटक होईन । नुवाकोटको लागी यो पुरानै रोग हो । केन्द्रियस्तरबाट बजेट परेको एउटा पनि आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न भएको रेकर्ड सायदै होलान् । धेरै आयोजना ओगट्ने अनि काममा ढिलासुस्ति गर्ने अधिकांश ठेकेदार कम्पनीको काम नै हो ।
विदुर नगरपालिकाबाट गेर्खु हुँदै सुर्यगढी जोड्ने मोटरबाटो निर्माण गर्ने ठेहेदार कम्पनीले नै विदुर नगरपालिका वडा नम्बर १ र १० जोड्ने पक्कि पुलको ठेक्का लिएको थियो । पक्कि पुलको डिजाईनिङ र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी हिमडुङ एण्ड थोकर कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लियो । तोकिएको समय सकियो, पुल भने अलपत्र मात्रै होइन ‘हास्य ब्यङ्ग्य गर्ने खालको नै छ ।
गेर्खु खोलमा बनिरहेको पुल सम्पन्न नहुँदै खोला भन्दा बाहिर ।
समयमै काम भएन भने गरेको काम कसरी उल्लो देखिदो रहेछ भन्ने नमूना पनि बनेको छ । पहिला खोलला बगेको स्थानकै माथि निर्माण भइरहेको पुल अहिले खोलाको विपरित धारमा देखिएको छ । गल्छि त्रिशुली आयोजना अन्तर्गत बिदुर नगरपालिका वडा नम्बर १ र १० जोड्ने पक्कि पुलको निर्माण कहिले सम्पन्न होला भनेर सोध्ने निकाय पनि नरहेको गुनासो स्थानीयहरूको छ । तोकिएकै समयमा यो पक्कि पुल निर्माण सम्पन्न भएको भए यो दुदर्शा नभित्रिने अनुमान जानकारहरूले गर्दै आएका छन् ।
ति सडक र गेर्खु खोलाकै पुलको निर्माण जिम्मा लिने कम्पनी प्रतिनिधिसभा सदस्य बहादुरसिंह लामा तामाङको हो । जो प्रतिनिधि सभाको बिकास समितिका सदस्य समेत छन् । नीति तय गर्ने ब्यक्तिले नै नीति बिपरित काम गर्न थाले पछी नागरिकहरूले सम्बृद्ध मुलुकको आभाष गर्न पाएका छैनन् ।
Posted by image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Sunday, September 29, 2019 No comments:
सिस्डोलमा अर्को समस्या, फोहोरको पहिरोले सडक अवरुद्ध
ककनी/सिस्डोलमा फालिएको फोहरकै पहिराले लामो समयदेखि सडक अवरुद्ध भई फोहर लैजान र स्थानीयवासीको आवागमनमै समस्या भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले आयोजना गरेको राजधानीको फोहर व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रियामा सिस्डोलमा फालिएको फोहरकै पहिराले लामो समयदेखि सडक अवरुद्ध भई फोहर लैजान र स्थानीयवासीको आवामनमै समस्या भएको स्थलगत अनुगमनका क्रममा देखिएको सांसद जीपछिरिङ लामाले बताए । सांसद बहादुरसिंह लामाले चार वर्ष अघि संसद्को सुशासन समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा लिच्चडलाई पिउन मिल्ने पानी बनाइ कोल्पुखोलामा बगाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीयवासी प्रभावित भएका गुनासो गरे ।
सांसद विन्दा पाण्डेले तीन तहका सरकारमध्ये फोहर कसले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट गर्न माग गरे । जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले फोहर व्यवस्थापनका नाममा धेरैले विदेश भ्रमण गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकाले खर्च राज्यलाई फिर्ता गर्न माग गरे । ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर लामाले फोहरका कारण सिस्डोल क्षेत्रमा रोगको सङ्क्रमण फैलिएर गाई, भैँसी, बाख्रालगायत चौपाया मर्न थालेका, जमीनमा उब्जनी घटेको, मानिसमा अनेकथरी स्वास्थ्य समस्या आउन थालेका गुनासो गरे ।
भूईचालोले ऋणी बनायो
विदुर/२०७२ सालको भुकम्प पछि अधिकांश नागरिकहरू ऋणी भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सि ईन्टरनेश्नल नेपाल नुवाकोटले आयोजना गरेको भुकम्प प्रभाबित नागरिकहरूले लगेको पैसाको प्रभाव र लगानी सम्बन्धि छलफलमा भुकम्प पछि अधिकांशको लगानी पुर्न निर्माणमा गएको सरोकार वालाहरूले बताएका हुन् । कार्यक्रममा जिल्लामा सक्रिशिल विभिन्न बैंक तथा सिवत्तिय संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू र भुकम्प पिडितहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागि भएका नुवाकोटका बैङ्करहरूले कुनै पनि उद्यमी तथा ब्यवसायीहरूले ऋण नपाएर ब्यवसाय गर्न पाईएन भन्ने अबस्था नरहेको बताए । बैङ्करहरूले नुवाकोटमा बित्तिय संस्था धेरै भित्रिएकोले हरेक ठाँउमा बित्तिय संस्थाको पहुँच पुगेको बताएका छन् । छलफलमा बङ्करहरूले किसानहरूलाई खतीबारी बाझो नराख्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
निकुञ्जसंग राहत माग्ने बढे
रसुवा/लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका वन्यजन्तुले अन्नबालीमा क्षति गरेको भन्दै राहतका लागि निवेदन दिनेको संख्या बढ्दै गएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा रसुवा जिल्लाका मात्रै २० जना कृषकले राहतका लागि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज निवेदन दिएका छन्् । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकसहित तीन जिल्लामा फैलिएको छ ।
नुवाकोटबाट अघिल्लो र चालू आर्थिक वर्षमा १ सय १७ जना कृषकको निवेदन परेको निकुञ्जले बताएको छ । धेरैजसो कृषकले जंगली बँदेलले अन्नबाली क्षती गरेको भन्दै निवेदन दिएका छन् । भालुले मानवीय क्षति गरेको र चितुवाबाट पशुको क्षति भएको निवेदन पनि परेको छ ।
वन्यजन्तुबाट अन्नबाली र पशुपन्छी क्षति गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । निकुञ्जले अहिलेसम्म ४० जना कृषकलाई ५ लाख ५ हजार १ सय राहत रकम वितरण गरिसकेको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी शिवलाल गैरेले बताए ।
निर्देशिकामा मानवीय, पशुधन, घरगोठ, भण्डारण गरेको अन्न र खाद्यान्न बालीको क्षतिका लागि राहत दिने व्यवस्था छ । वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत पाउने कुरा थाहा पाएपछि निवेदन दिनेको संख्या बढ्दै गएको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रमुख संरक्षण अधिकृत सुष्मा रानाले बताए ।
सामान्य घाइतेलाई २० हजार र सख्त घाइतेका लागि प्रकृति हेरी प्रेषित कागजात र विशेषज्ञ चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा बढीमा दुई लाखसम्मको उपचार खर्च दिने व्यवस्था छ ।
औषधिको अध्यक्ष टलकमान
विदुर/नेपाल औषधि ब्यवसायि संघ नुवाकोटको प्रथम अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्षमा टलकमान श्रेष्ठलाई चयन गरेको छ । श्रेष्ठ विदुर नगरपालिका वडा नं. ४ का अध्यक्ष एवं नगरपालिकाका प्रवक्ता समेत हुन् ।
संघको जिल्ला कार्य समितिमा उपाध्यक्षमा रबिदास श्रेष्ठ, महासचिबमा भिमबहादुर रोक्क, सहसचिबमा हरेराम सापकोटा, कोषाध्यक्षमा प्रेमकुमार सापकोटा र सहकोषाध्यक्षमा रामराजा भण्डारी चयन गरेको छ । सदस्यहरूमा बिनोदराज खरेल, गिता अधिकारी र नबिनन्दमान बैद्य श्रेष्ठ चयन भएका छन् । े
अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै, नेपाल औषधि ब्यबसायी संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद रिसालले औषधि ब्यबसायीहरूले ठुलो सेवा प्रबाह गर्दै आएको बताए । राज्यले निःशुल्क दिनु पर्ने सेवा औषधि ब्यबसायी संघले दिएको उनको दावी छ । राज्यको स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपस्थिति नभएको ग्रामिण भेगमा समेत औषधि ब्यबसायी संघको उपस्थिति बाक्लो रहेको उल्लेख गरे ।
जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले समुदायका नागरिकहरू छिट्टै निको हुने औषधिको खोजीमा रहेको बताए । सामान्य औषधिले बिषो हुने रोगको लागी समेत कडा औषधिको प्रयोग हुँदै आएकाले त्यसलाई रोक्नु पर्ने उनले बताए ।
विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले नगर भित्र रहेका औषधि ब्यबसायीहरूलाई स्थानिय तहसँग सक्रिय भएर काम गर्न आग्रह गरे । नगरपालिका भित्र रहेका सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पुराउन स्थानिय तहसंगै जानको लागी उनले आग्रह गरे ।
विदुर/नर्जामण्डपमा जापानी सहयोग नियोग जाइकाको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको विज्ञान मावि बिद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । ५ करोड ७१ लाखमा जाईकाको सहयोगमा नेपाल सरकारद्वारा निर्मित भवनको एक कार्यक्रमका बीच हस्तान्तरण भएको हो । तादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद पाण्डेले भवन हस्तान्तरण गरेका हुन् । नवनिर्मित ५७ वटा भवन मध्ये सभाहल सहित भएको पहिलो भवन बनेको ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा तादी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ईश्वरी उप्रेतीले बताए ।
युनोप्स् र सरकार रमिते, जनता पिडामा
विदुर/भुुकम्पका कारण घरबास गुमाएका नुवाकोटका सुकुम्वासी र भूमिहीन भूकम्पपीडित जग्गा अभावका कारण घर बनाउनबाट वञ्चित भएका छन् । भुकम्प पछिको चौथो दसैं सुरु हुँदा पनि थुप्रै नागरिकहरूको यो पालीको दसैं पनि घर बाहिर नै हुने भएको छ । यस्तौ समस्या परेकालाई सहयोग गर्ने भनेर सञ्चालनमा ल्याइएको ‘परियोजना’ रमिते बनेको छ ।
२०७२ सालमा गएको ‘गोरखा भूकम्प’का कारण नुवाकोट जिल्लामा ४१७ परिवार विस्थापित तथा २५२ घर परिवार भूूमिहीन भएका थिए । यिमध्ये आधाभन्दा बढीले अझै घर बनाउन नसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ । नुवाकोटको समग्र पुनःनिर्माण ७५ प्रतिशत पूरा हुँदा जग्गा अभावका कारण सुकुम्वासी र भूमिहीनको समस्या अझै कायमै रहेको एकाइ कार्यालयका सूचना अधिकारी विशाल सापकोटाले बताए ।
भूकम्पबाट नुवाकोट जिल्लामा विस्थापित भएका ४१७ परिवारमध्ये हालसम्म २७१ परिवारले सरकारी अनुदानमा जग्गा खरीद गरी नयाँ घर बनाएका छन् । यस्तै २५२ भूमिहीन परिवारमध्ये ७७ परिवारले जग्गा खरीद गरी आफ्नो घर पुनःनिर्माण गरेका छन् ।
भूकम्पका कारण घरमा क्षति र सुख्खा पहिराले बस्ती बगाएपछि विस्थापित भएका तथा आफ्नो नाममा कहीँकतै जग्गा नभएका (भूमिहीन)लाई राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले सुरक्षित स्थानमा घडेरी खरीदका लागि रु दुई लाखसम्म अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । घडेरी खरीदका लागि सरकारी अनुदान वितरण प्रक्रिया ढिला हुँदा आवास निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । समयमै जग्गा र अनुदान वितरण नहुँदा विस्थापित परिवारले घर बनाएका छन् ।
बस्ती जोखिम भएका कारण विस्थापितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र भूमिहीनलाई जग्गा दिने भनेर प्राधिकरणले निर्णय नगर्दा पुनःनिर्माण प्रभावित भएको हो । विस्थापित मध्ये २६ परिवारले जोखिम स्थानमै घर बनाएका छन् भने २१ परिवारले अर्काको जग्गामा घर बनाएका कारण उनीहरूका लागि जग्गा खरीद गर्न दिइने दुई लाख तथा आवास निर्माणका लागि दिने थप तीन लाख अनुदान रोकिएको छ ।
यो समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्न भारतिय सरकारले नुवाकोटमा सञ्चालनमा ल्याएको परियोजना भने रमिते बनेर बसेको छ । युनोप्स्ले नुवाकोटमा सञ्चालन गरिरहेको भनिएको परियोजनाको सम्झौतामा समस्यामा परेकालाई सहयोग गर्ने उल्लेख छ । तर उनीहरूले सहयोग गरेको छैन ।
त्यस्तै, नुवाकोटबाट सिफरिस भएका १४० भूमिहीन परिवारको प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयबाट निर्णय नहँुदा उनीहरू अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य भएका छन् । भूकम्पका कारण नुवाकोट जिल्लामा ७६ हजार ८ सय ९ परिवारको घर पूर्णरुपमा क्षति भएको तथ्याङ्क छ । हालसम्म तोकिएको मापदण्डअनुसार भूकम्प प्रतिरोधी नयाँ घर निर्माणको सम्झौता गरेर ७३ हजार ३७ परिवारले पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रकम लिइसकेको एकाइ कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ । त्यसमध्ये ६७ हजार ६१२ परिवारले घरको जग हालेर दोस्रो किस्ताको २ लाख तथा ५५ हजार १५ परिवारले नयाँ घरको पुनःनिर्माण सम्पन्न गरेर तेस्रो किस्ताको ३ लाख बुझेका छन् ।
सहायता कक्ष प्रभावकारी
विदुर/जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले समुदायाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत बट्टार बसपार्कमा यात्रु सहायता कक्षा स्थापना गरेको छ ।
नजिकदै गरेको चाडपर्बमा नागरिकहरूको संख्यामा बढी हुने भएकाले उनिहरूलाई सहजिकरण गर्न सहायता कक्षाको स्थापना गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ । चाडपर्वका बेला यात्रुहरूलाई हैरानी हुन सक्ने भन्दै यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको हो । कुनैपनि यात्रुले समस्या भोग्नुपरेमा यात्रु सहायता कक्षमा सम्पर्क राख्नको लागी प्रहरीले आग्रह गरेको छ । चाडपर्वका बेला सवारी साधानहरूमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, बढी भाडा लिने लगायतका कार्यहरू हुने भएकाले त्यसको न्युनिकरण गर्नका लागि यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याईएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ ।
प्रत्येक सवारी साधनहरूमा भाडादरको सूची अनिवार्य राख्नु पर्ने, सबारीले तोकेको सबै सुबिधाहरू अनिबार्य उपलब्ध गराउनु पर्ने जनाएको छ । सबै कम्पनीका भाडादर, उपलब्ध गराउनो सेवाहरू यात्रु सहायता कक्षमा समेत राखिने प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीको सहायता कक्षले राहत महशुस भएको नागरिकहरूले बताएका छन् ।
प्रेस स्वतन्त्रता खतरामा पर्यो : कोइराला
विदुर/नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले प्रेस स्वतन्त्रता खतरामा रहेको बताएका छन् । उनले अहिले न्यायपालिका पनि निरीह रहेको टिप्पणी गरे ।
दोस्रो चरणको नेपाली कांग्रेस नुवाकोटले आयोजना गरेको राष्ट्रिय जागरण अभियान समापनका क्रममा नेता कोइरालाले सरकारले ल्याएका मानव अधिकार आयोग, प्रेस स्वतन्त्रता, सम्पत्तिमाथिको अधिकार र राष्ट्रिय सुरक्षा, मिडिया काउन्सिल, गुठी लगायतसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए लोकतन्त्र जोखिममा पर्ने बताए ।
नेता कोइरालाले विधान र विधिलाई टेकेर गए पार्टी एकढिक्का हुने बताए । ‘तदर्थवादमा नेपाली कांग्रेस तचल्ने बताउदै उनले भातृ संस्थाहरू चुस्त दुरुस्त बनाएर अधिवेशन गर्न‘पर्ने बताए । गुटउपगुट नेतृत्वले सञ्चालन गरे गिरोहमा परिणत हुने उनले बताए ।
कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य बहादुरसिंह तामाङ्, नुवाकोट कांग्रेसका सभापती जगदिश नरसिंह केसी, पूर्व सांसद डा शोभाकर पराजुली, जागरण अभियानका लागी नुवाकोटका लागी खटिइएका प्रतिनीधीह शिबराज अधिकारी, डा राजाराम कार्की, जीवन डङ्गोल र बिनिता अधिकारी, तरुण दलका केन्द्रीय महासचिव भुपेन्द्रजंङ् शाही लगायतले मन्तब्य राखेका थिए ।
पर्यटन प्रबद्धनको पहिलो खुड्किलो होटल
विदुर\_प्रतिनिधिसभा सदस्य हितबहादुर तामाङले पर्यटन प्रबद्धनको पहिलो खुड्किलो होटल रहेको बताए । भ्रमण बर्ष २०२०मा नेपालमा २० लाख पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्य राखिएतापनि आबाश्यक पुर्बाधारको बिकास हुन नसकेको उनले बताए । बिशेषगरी पर्यटकिय क्षेत्रहरू हिमाली भु–भागमा रहेकाले त्यस तर्फ पुग्ने सडकमार्गको अबस्थाले नेपालको लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने तामाङले बताए ।
होटल तथा पर्यटन ब्यबसायी संघ प्रदेश नम्बर ३ ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्यले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा ३ नं. प्रदेश सभा सदस्य केशबराज पाण्डेले नुवाकोटको थुम्कैपिच्छे पर्यटकिय स्थलहरू रहेपनि स्थानिय तह, प्रदेश र संघले त्यसको संरक्षण गर्न नसकेको बताए । पुरातात्विक महत्व बोकेका सम्पदाहरूको पुनःनिर्माण पुरातत्व बिभागले गर्नुपर्ने बताए । बाह्य पर्यटन भन्दा पनी सुरुमा आन्तरिक पर्यटनत प्रबद्धन तर्फ स्थानिय सरकार आकर्षित हुनु पर्ने बताउ ।
जिल्ला ससमन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले केही चहलपहल आन्तरिक पर्यटनले गरेतापनि बाह्य पर्यटन भित्र्याउने सम्पदाहरूको प्रचार प्रसार गर्नु पर्ने बताए । प्रति ब्यक्ति आय बढाउन समेत पर्यटन प्रबद्धनले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने भएकाले सबै पक्षहरू इसमा जोडिनु पर्ने बताए ।
विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले नुवाकोटमा रहेका पर्यटकिय स्थलहरूको सम्भाबनाको खोजी गर्नु पर्ने बताए । लुकेर रहेका सम्पदाहरूको प्रचार प्रसार गर्दै आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटन भित्र्याउनु पर्ने बताए ।
नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले भ्रमण बर्ष २०२० लाई सफल बनाउनको लागी प्रशासन तत्पर रहेको बताए । पर्यटन प्रबद्धनको पहिलो खुड्किलो होटल रहेकाले प्रकृया र पद्धत्तिमा सञ्चालन भएका होटलदहरूलाई २४ सै घण्टा सुरक्षा दिन प्रशासन लागि पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा होटल तथा पर्यटन ब्यबसायी संघ प्रदेश नम्बर ३ का अध्यक्ष सन्तोष उप्रेतीले प्रदेश नम्बर ३ भित्र रहेका सबै पर्यटकिय स्थलहरूको खोजी गर्दै संघ र प्रदेशसंग सहकार्य गर्ने बताए । तिनै तहको सरकारसँग सहकार्य गर्दै पर्यटन बिकासमा लागी पर्ने बताए ।
नुवाकोटबाट सुरु भएको कार्यक्रमलाई ३ नम्वर प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा पुराउने बताईएको छ । तिनै तचहको सरकारको समन्वयमा पर्यटन बर्षलाई लक्षित गर्दे आबाश्यक पुर्बाधारहरूका खोजी तथा संरक्षणमा सबै पक्ष लाग्नु पर्ने बताए ।
सडक आयोजना आबाश्यक
बेत्रावती/रसुवागढी नाका जोड्ने सडकको नयाँ आयोजना लगाएर काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । २०४२ मा निर्माण भएको बेत्रावती–धुन्चे सडक मर्मत गरेर मात्रै यातायात सहज बनाउन नसकिने भएकाले आयोजना ल्याउनुपर्ने भएको हो ।
वर्षेनी सडकको मर्मत तथा सुधारको काम गरिँदै आएको भए पनि अवस्था नसुध्रिएपछि नयाँ आयोजना ल्याउन आवश्यक रहेको प्राविधिकले बताएका छन् । वार्षिक रूपमा विनियोजन भएको बजेटले सडकमा गर्न‘पर्ने काममध्ये १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसकेको डिभिजन सडक कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ ।
अघिल्लो साता जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रसुवाको बैठकमा डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर सरोज कडारियाले बजेट अभावमा अप्ठेरो ठाउँ सुधार गर्ने बाहेक अरु काम गर्न नसकिएको धारणा राखेका थिए ।
सडक सुधार तथा मर्मतका लागि करिब तीन अर्ब लाग्ने उनको भनाइ थियो । उनले सडकको सर्भे तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने काम सडक विभागले गर्ने भएकाले लागत स्टिमेट गर्ने काम मात्रै कार्यालयले गर्ने बताए ।
डिभिजनले बनिसकेको सडकको मर्मत सम्भार गर्ने काम मात्रै गर्छ । यसका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यो वर्ष यही भदौ मसान्तभित्र ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार काम अघि बढाइएको डिभिजन प्रमुख निरज शाक्यले बताए ।
‘नाका जोड्ने सडकलाई पूर्ण रूपमा सुधारको काम गर्ने हो भने छुट्टै आयोजना चाहिने बताईएको छ । चालु आव ०७६÷७७ का लागि जिल्लामा सानो भार्खु, मूलखर्क, खोपाङ भीरस्थित सडकमा ढलान गर्ने कार्ययोजना छ । –शशिकुमार डङ्गोल
२०७६ भदौ २३ गतेको सम्पादकिय
गाई धन्दा नियन्त्रण गरौं
बट्टार बजारको हावाघरमा शनिवार गाई जिउँदै पुरेको अवस्थामा स्थानीयहरूले फेला पारे । जिवितै उद्धार गरिएको गाईले मनविय संवेदना र पशु चौपायाको अवैध ओसारपसार र तस्करीको भयावह चित्र सार्वजनिक गरेको छ । वर्षेनी भदौ, असोजमा काठमाडौं उपत्याकाबाट गाई र गोरुको संख्यौं संख्या नुवाकोट हुँदै रसुवा जाने गरेको छ । यो वर्षदेखि चल्दै आएको छ । यसरी रसुवा पुगेको गाई गोरु चीन पुग्ने गरेको अनौपचारिक तथ्यहरूले बताएको छ । मासु खानकै लागि यसरी शहर बजार र गाउँबाट समेत जम्मा गरिने पशु चौपाया त्यसमा पनि नेपालमा पुजिदै आएको गाईको निकासीको लागि सरकारी पक्षबाट खासै प्रयास भएको पाइएको छैन । शहर बजारमा छाडा रहेका गाई गोरु निःशुल्क पाइने र अझ घरपालुवा गाई गोरु ल्याउनेले त घरधनीको तर्फबाट बाटो खर्च समेत पाउने गरेका छन् । यसरी दजनौं वा सयौंको संख्यामा जम्मा गरिने गाई र गोरु नुवाकोट हुँदै चीन पु¥याइन्छ । यसरी निर्यात हुँदाका विभत्स दृष्य र घटनाक्रम बर्षेनी देखिदै र हुँदै आएका छन् । शनिवारको घटनाले भने पशु अधिकार र मानव संवेदना माथीनै प्रश्न चिन्ह गरेको छ । अन्य गाई गोरु सरह हिड्न नसक्ने भएकालाई बाटोमै छाडिदिने र त्यसको अन्य असर भोग्दै आएकाहरूले पुर्दै गरेको खाल्डोबाट जिउँदै गाई निकालेका छन् ।
उपत्यकाबाट मात्रै होइन पछिल्ला केही वर्षदेखि नुवाकोटकै ग्रामिण भेगबाट समेत गाई निर्यात हुन थालेको छ । घरपालुवा गाई घरधनीसंग निःशुल्क खरिद गरेर केही गिरोहहरूले रसुवा र केरुङ्गको सिमासम्म पु¥याउने गरेका छन् । सिमाबाट नभई चोरबाटोबाट चीन निकासी गर्दै आएको गाईको व्यापारको अवस्था काहालीलाग्दो छ । मासु प्रयोजनका भइरहेको गाईको यो व्यापार नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान र सावधानी अपनाउनु जरुरी देखिएको छ । यही क्रम विकास भइरहँदा यो धार्मिक मुद्दाको रुपमा अगाडी देखिन सक्नेछ । हिन्दु धर्मालम्वीहरूले उच्च सम्मान दिने गाईको व्यापार त्यो पनि मासु प्रयोजनका लागि भइरहँदा यसले निम्त्याउने र असहिष्णुताले हाम्रो संस्कृति, आस्था र परम्परालाई गर्न सक्ने गम्भिर क्षय तर्फ हामी सबै सचेत र सावधान बनौं ।